နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားကိုဘာ​ကြောင့်​သင်​ယူသင့်​သလဲ — Steemit
taitano (41)in #esteem •4years ago (edited)
လူမှုဗေဒပညာရှင်နှင့်ဒဿနပညာရှင်, "အကြိမ်ပေါင်းများစွာသငျသညျလူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်များစွာသောဘာသာစကားများအမျှသင်သိ။ " တခါဆိုပါတယ်ဒါဟာသည်ဤစကား၌ပါသောပညာကိုငြင်းပယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ တိုင်းဘာသာစကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသငျတို့သညျအခွားသောလူကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခွင့်ပြုသဒ္ဒါဆောက်လုပ်ရေးရုံအရေအတွက်ကမျှမက, ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲစိတ်ဓာတ်၏ (နှင့်တစ်ချိန်တည်း-တစ်ပစ်မှတ်မှာ) တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်စကားကိုပြောတတ်သောလူများစဉ်းစားတွေးခေါ်၏နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိသောဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းစကားလုံးအသစ်တစည်းကျက်မှတ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းလေ့လာနေ၎င်း၏ခေတ်ပြိုင်အခြေအနေတွင်သို့တူးဖော်ခြင်း၎င်း၏ဆင့်ကဲအောက်ပါမသာပါဝင်သည်။
အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုသင်၏မိဘများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိထိုနည်းတူသင်၌ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး shaped သိရသည်။ သင်သိယုတ္တိနည်း, ပိုဘာသာစကားများ, ပိုမိုကွဲပြားခြားနားနှငျ့သငျဖွဈလာနိုငျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတဈဦး၏လေးနက်; သင်တို့အဘို့အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော Paradigm နားလည်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အလားအလာထပ်တိုးနှင့်ပိုပြီးပွင့်လင်းစိတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်; သငျသညျမရမယ့်ပုံမှန်-နှုတ်-လမ်းအတွက်အခြားလူများနှင့်အတူသင်၏ဆက်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အလိုင်းများအကြားဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်စသည်တို့ကိုအမူအရာ, circumlocutions, ရူပကတှေ၏အတိုင်းအတာအတွက်ကိုသင်အသစ်တစ်ခုကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးချမှတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် သင်တစ်ဦးဘာသာစကားအသစ်ကိုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးအခါတိုင်းဖြစ်ပေါ်ရသောသငျ့စိတျထဲမှာ။
ဟုတ်ပါတယ်, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကိုလေ့လာစတင် ပို. လက်တွေ့နှင့်လျော့နည်းအတွေးအခေါ်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကကတည်းကနိုင်ငံခြားသားတွေနှငျ့ဆကျသှယျနိုငျသူကလူကိုအလွန်တန်ဖိုးထားပြီ။ အဘယ်သူမျှမကလူကတခြားနိုင်ငံတွေ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စကားပွောနိုင်ရှိခဲ့သည်ဆိုပါကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း, သံတမန်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးခက်ခဲသို့မဟုတ်ပင်မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ခေတ်အခြေအနေကပင်မြောက်မြားစွာကွန်ပျူတာ-ကူညီဘာသာပြန်ချက် tools များ၏တည်ရှိမှုရှိနေသော်လည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်မထားပါဘူး။
သာက Google Translate ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးအဆင့်မြင့် tools တွေကိုမဆို, သင်သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်ဘာသာပြန်ဆိုသူသို့မဟုတ်စကားပြန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘယ်လောက်ယုတ်ညံ့နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်ကို အသုံးပြု. ဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာပေးစာယူရှိခြင်းကြိုးစားပါ။ ယနေ့ခေတ်ပြည်ပမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ကုမ္ပဏီအများအပြားရှိပါတယ်ဆင်ခြင်, အနည်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားစကားပြောအရည်အချင်းပြည့်သောလူများအတွက်ဝယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသည်။ တောင်မှသင်ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ခရီးသွားလာမည်မဟုတ်ပါလျှင်, သင်ဆဲပိုပြီးအလုပ် (Fluentin3months) မှာတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ရှာတွေ့ဘို့အပြင်ကပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပြင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူခြင်းအဘို့များစွာသောအခြားအကြောင်းပြချက်များရှိပါသည်။ သငျသညျတခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောနိုင်ငံတွင်တစ်ဦးတည်းကသင်၏ဘော်ဒါဆောင်နှစ်နာရီအတိတ်သန်းခေါင်ကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း, ဤနိုင်ငံ၏ဘာသာစကားမှာဘာမှပြောလုံးဝမရခဲ့ကြသောအခါသင်သည်အစဉ်အခွအေနမြေိုးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ဖူးသလား သူတို့ကိုသင်ကသင်၏မြေပုံကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာ, (သင်ကယဉ်ကျေးကြည့်မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာမဟုတ်ဘဲသံသယဖြစ်ဖွယ်သည်) သင်၏မျက်နှာကိုအပေါ်တစ်ဦးရီစရာအပြုံးနှင့်အတူလူတွေချဉ်းကပ်; ထိုသူအချို့တို့သည်သင်တို့ကိုလဈလြူရှု, အခြားသူများကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်ညိတ်အပေါင်းတို့နှင့်၎င်းတို့၏လက်ချောင်းညွှန်ပြအလျင်အမြန်ပြောနေတာ start လမ်းညွန်-ပေမယ့်သူတို့ကိုသင်နားမလည်နိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ကူညီပေးရန်ရန်သဘောတူနှင့်ရလဒ်အတိုင်း, သင်တို့၏စီးနင်းအကြောင်းကိုငါးမိနစ်ကြာ, နှင့်ကားမောင်းသူသင်တစ်ဦးတရာဒေါ်လာပညတ်သူတစ်ဦးတက္ကစီယာဉ်မောင်းကိုရှာပါ။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောပတ်ဝန်းကျင်ကနေလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအသံစခွေငျးငှါသကဲ့သို့လိုက်တယ်, ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ပါဘူး; အချို့နိုင်ငံများတွင်-ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာဥပမာ-သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်အထဲတွင်ဆက်သွယ်နိုင်ကလူ, သင်မူကားသွားလာတောင်ပိုင်းသို့မဟုတ်အရှေ့ဖို့များသောအားဖြင့်, အဝေး, အလျော့နည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောလူတွေတွေ့လိမ့်မည်။
#learning #foreign #language